Ihe na-eme ka mpempe ọkụ dị iche iche na-eche echiche iji gbochie mwakpo mbanye anataghị ikike
Usoro azụmahịa ọ bụla chọrọ nkwụsị nchedo ụfọdụ. Maka onye nwe ụlọ weebụ,ịhapụ ndị omempụ nwere ike ịbụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ọrụ gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-agba ọsọ na-eme ka ndị na-agba ọsọ na-aga ebe ha ga-aganchịkwa nchịkwa yana data dị mkpa site na weebụsaịtị weebụ. Ozi a nwere ike ịgụnye ozi ndị ahịa bara uru yanadata kaadị akwụmụgwọ.
Ịdebe ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịbụ ihe dị mma ịme. Ị nwere ike ịnwetaghachi azụọ bụrụ na usoro dum abata na mgbada - online bingo bonus. Nche nke ozi ahịa gị dị n'aka gị dị ka ụlọ ọrụ weebụha. N'ihi ya, ị na-ahapụ ọrụ niile nke Search Engine Optimization na usoro ị ga-esi na-abata.
Jack Miller, Onye Nlekọta Ndị Ọrụ Nlekọta Ndị ahịa nke Ọcha ,akọwa ụfọdụ n'ime ụzọ iji kpuchie gị na ebe nrụọrụ weebụ si hackers:
Jiri okwuntughe echedoro.
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji hụ na nchekwa nke saịtị gị bụ site na ijiederede ozo. Onye ọ bụla ọkpụkpọ ụkwụ malitere na ọrụ nke ịnwa ịkọwa paswọọdụ. Oke okwuntu ozo di ka 12345 enweghi obi iru ala ma buru onyedị mfe nghọta. Ọ bụkwa ihe amamihe dị na ya ịghara iji okwu ndị mmadụ nwere ike ịkọ. Onye ọ bụla na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ gị ga-enwe ikikere ederede. Ankwenye na-adịghị ike na-eme ka ọnọdụ gị na ebe nrụọrụ weebụ gụnye ndị na-agba ọsọ.
Ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ a na-ejighị na-eme ihe na-adịghị mfe iji arụ ọrụ ụfọdụ dị ala. Mgbe ị na-emepụta yasaịtị gị, ọ dị mkpa iji usoro nhazi nke nwere ike ghara ikwe ka ịbanye n'ime nsọtụ dị iche iche. A ezi ihe atụ bụ ụfọdụ PHP na ebe nrụọrụ weebụ.Ebe nrụọrụ weebụ ndị a na-enweghị nchebe na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwere ngwa Linux nwere ike ịbanye na nchekwa data. Ọzọkwa, ngwa ngwa dịka Havij ma ọ bụUsoro nyocha nchọgharị (BeeF) nwere ike ịnweta ohere nchekwa data n'enweghị mkpa nke iji paswọọdụ ha.
Iji nchekwa nchedo elu maka URLs nwere ike idozi ndị ọrụ gị megide ụfọdụ n'imeihe kachasị mfe mbanye anataghị ikike. HTTPS nwere ike inyere mmadụ aka inwe nchedo na nchekwa mgbe ị na-enye ozi nzuzo nkeonwe na ebe nrụọrụ weebụ. Nke aụdị nchebe agaghị ekwe omume na usoro ntanetịime ndị ọzọ. Ọ dịkwa mkpa iji mara ndị ọbịa banyere ụdị nchebe a.
Jiri plugins nche.
Mgbe ị na-abanye weebụsaịtị ma na-emepụta SEO, enwere ụfọdụ plugins nwere ikechebe ọrụ nke ebe nrụọrụ weebụ gị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị nwere ike iji ngwá ọrụ BulletProof Nche ma ọ bụ ọbụna IThemes Security. Ngwaọrụ a nwere ikedozie nsogbu ọ bụla dị na ihe ọ bụla ikpo okwu ma ọ bụ ngwa ngwa mmemme.
Nchebe nke ebe nrụọrụ weebụ na ndị ahịa ya na-adabere n'ikike ọ nwere ike ịnọ na yahackers. Ndị na-eme ihe ike nwere ike idozi saịtị maka ọtụtụ ihe. Nke mbụ, ha nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ na-asọmpi na-agbalị ime ka saịtị gịala. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha nwere ike ịbụ ndị n'ebumnuche ha amaghị, kama ha nwere obi ike na ha ga-enwe nsogbu na ụzọ ụlọ ọrụ gị na-arụ ọrụ.N'ihi ya, ọ pụrụ ịbụ ihe dị mkpa iji zere ndị na-agba ọsọ, karịsịa site na ebe nrụọrụ weebụ. Nduzi a nwere ike inyere gị aka imezunke a ka ị na-eme nchebe nke saịtị gị ike. Ọzọkwa, ndị ahịa gị nwere ike ịnọ n'enweghị nsogbu.